68% yesaphulelo kwiCalvinKlein.ca Iikhuphoni kunye neeKhowudi zesaphulelo
CalvinKlein.ca Iikhowudi zekhuphoni
I-30% icinyiwe Thatha ngaphezulu kwe-50% yokuThengisa ukuThengisa + ukuThengisa kokugqibela. Thatha ngaphezulu kwe-50% yokuThengisa ukuThengisa + ukuThengisa kokugqibela. Unyuselo luphela nge-7.15.21 ngo-11: 59 PM PT. Ayinakudityaniswa nayo nayiphi na into oyinikwayo. Isebenza kuphela kwi-calvinklein.ca. Ayisebenzi kumakhadi ezipho okanye kwiintengo zangaphambili.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 kwiXabiso elincinci lokuSebenzisa + nangakumbi Unamhlanje uCalvin Klein waseCanada oPhuma eziPhezulu: $ 25 Isaphulelo rhoqo kwi $ 100 Spent. Ukuhanjiswa kweFree Ground kwiOrder yee- $ 99 okanye nangaphezulu. Itotali yeeNkonzo. 6. Iikhowudi zekhuphoni. 4. Iidili zokuHambisa simahla. 1.
I-40% yokuShiya i-Order yaseSitewide + i-20% yeSaphulelo Khetha iiSweaters, njl Nantsi iphetshana likaCalvin Klein CAnada nge-50% yokuKhutshwa kwabaNtu kwezeMpahla yokuThengisa, ukuThengwa kunye nokuThengwa kwezihlangu Fumana ama-50% eSaphulelo ekuthengeni kwakho iimpahla zabasetyhini abakhetha ukuThengisa, ezokuFakela, kunye neembadada eCalvin Klein CA. Thenga iimpahla, iibhegi, izihlangu, iimpahla zangaphantsi, ivumba elimnandi, kunye nokunye.
Ukongeza i-20% kwiNdawo yokuHlala Sineekhowudi zekhuphoni ezingama-23 ukusukela ngeJuni 2021 Bamba amatikiti asimahla kwaye ugcine imali. Idili yamva nje iyi- $ 25 Ikhutshwe rhoqo kwiidola ezili-100.
Ukuya kuthi ga kwi-30% yokuHlala ngaphandle + ngaphezulu kwe-20% kucinyiwe Khetha izitayile + Ngakumbi Wamkelekile kwiphepha lethu lamaphetshana kaCalvin Klein, uphonononge izaphulelo kunye nezithembiso zangoku zeCalvinklein.ca kunye neepromos zikaJulayi ka-2021. Namhlanje, kukho itotali ezi-3 zikaCalvin Klein kunye nezaphulelo. Unokucoca ngokukhawuleza iikhowudi zangoku zokukhuthaza uCalvin Klein ukuze ufumane izithembiso ezizodwa okanye eziqinisekisiweyo.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-10 kwiOdolo yakho UCalvin Klein odumileyo eCanada. Isaphulelo. Inkcazo. Iphelelwa lixesha. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70. Ukufikelela kuma-70% ezinto ezithengiswayo. ---. I-40% icinyiwe. I-40% icinyiwe ukhethe iimpahla zangaphantsi zabasetyhini.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zeOdolo eneNkcitho encinci Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 kunye nama-coupon angama-21 kaCalvin Klein, iikhowudi zokunyusa okanye ukuthengisa ngo-Agasti 2021. Esona saphulelo sanamhlanje: RetailMeNot Exclusive! Ukongeza kwi-30% xa usebenzisa imali eyi-100 + kwii-InStores.
Ukongeza ama-20% kwiZinto eziBalulekileyo zemihla ngemihla Gcina nenye yeeKhuphoni zikaCalvin Klein eziphezulu ngo-Agasti 2021: Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-40. Fumanisa i-26 ivavanyiwe kwaye yaqinisekiswa Iikhowudi zikaCalvin Klein, ngoncedo lweGroupon.
Iipesenti ezingama-20 zikhutshiwe kwiimfuneko zasehlotyeni Ukuthatha inxaxheba kukaCalvin Klein ("inkqubo") kunye nezibonelelo zayo zinikezelwa ngokokubona kukaCalvin Klein, Inc. ("CKI"). I-CKI inelungelo, ngokokubona kwayo, ukuguqula, ukongeza okanye ukucima nayiphi na imigaqo yenkqubo, imigaqo, iimeko, izibonelelo, okanye imbuyekezo, iphelele okanye ngokuyinxenye, nangaliphi na ixesha, nangaphandle kwesaziso, nokuba ...
I $ 25 Ikhutshwe rhoqo kwi $ 100 Ukuthatha inxaxheba kukaCalvin Klein ("inkqubo") kunye nezibonelelo zayo zinikezelwa ngokokubona kukaCalvin Klein, Inc. ("CKI"). I-CKI inelungelo, ngokokubona kwayo, ukuguqula, ukongeza okanye ukucima nayiphi na imigaqo yenkqubo, imigaqo, iimeko, izibonelelo, okanye imbuyekezo, iphelele okanye ngokuyinxenye, nangaliphi na ixesha, nangaphandle kwesaziso, nokuba ...
I-1% icinyiwe Kukho amakhuphoni kaCalvin Klein eeholide zikawonkewonke ezifana ne-4 kaJulayi, uSuku lweSikhumbuzo kunye noSuku lwaBasebenzi. Oku kukuvumela ukuba ugcine malunga ne-30-50% kwimpahla, iziqholo kunye nezinye izinto. UCalvin Klein ...
CalvinKlein.ca is rated 4.7 / 5.0 from 187 reviews.